မိန့်ခွန်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
လန်ဒန်ရောက် မြန်မာလူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံပွဲ ကောက်နုတ်ချက် မိုမို ၊ မိုးမခ၊ ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၂ ဇွန် ၂၂၊ လန်ဒန်မှာ Prospect Burma က စီစဉ်ပေးတဲ့ မြန်မာလူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံပွဲထဲက ပြောကြားချက်အချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။ “ဒီမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်လာတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ တခြား ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာ ရောက်နေတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ ကျမတို့နိုင်ငံကို ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကူညီနိုင်မလဲ ဆိုတာ တစ်ယောက်ချင်း တစ်ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့အရည်ချင်းအကိုဘယ်လို သုံးနိုင်မလဲဆိုတာမှာစဉ်းစားရမယ်။ ကျမကို မေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခု ခဏခဏ ကျမကို မေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အချိန်တန်ပြီလားတဲ့ ကျမအမြဲပြောတယ်။ ဒါကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ် လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ်ဘ၀ကိုယ် တာဝန်ယူရမယ်၊ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွက် ကိုယ်တာဝန်ယူရမယ်။ “ကျမကို မေးပြီးတော့...
“ပြည်သူတရပ်လုံးက ပါးပါးနပ်နပ် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်” နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု လက်ခံရယူပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း မူရင်း နှင့် ဘာသာပြန် ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၂ (မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုသူမှာ Dr ကောင်းမြတ်ကျော်ဖြစ်သည်။ မိုးမခက အနည်းငယ် ပြန်လည် တည်းဖြတ်ထားသည်) No tags for this post. Related posts No related posts.
မိန့်ခွန်း မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၂ (ဓာတ်ပုံ – NLD) ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးခြင်း ၂၄ နှစ်မြောက်ကာလတွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က နိုင်ငံတကာရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအတွက် ပေးပို့သော အမှတ်တရ စကား မူရင်း – Burma VJ Media Network No tags for this post. Related posts No related posts.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိုးကောင်းမြို့တွင် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက် (၁) Yangon Press International – http://www.facebook.com/ygnpress ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၃ ၊ ညနေ ၅နာရီခွဲ ယနေ့ မြစ်ကြီးနားမြို့ ရောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – စိုးဇေယျာထွန်း – Reuters) ကျွန်မတို့ရောက်လာတာ အင်မတန်မှနောက်ကျပါတယ်။ ရန်ကုန်က လေယာဉ်ပျံထွက်တာနောက်ကျလို့ဖြစ်သွားတာပါ။ နောက်ကျပေမယ့်လည်း လာရကျိုး အများကြီးနပ်ပါတယ်။ ကျွန်မက မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (ဟေးးး) Tags: ကချင် Related posts ရိုးပြေပြစ်အောင် – ၀ရိန်းကောင်းကြသူများ (၀တ္ထုတို) (0) နှလုံးသားတွေလှူတဲ့နေ့ (5) နှင်းဆီ … ရတု (0) နိုင်ငံတော် ပြည်အရေးနှင့် ဘကြီးမိုး (0)...
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ကျမဟာ ဒီရွာကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လာတာဆိုပေမဲ့ နောင်လဲ မကြာခဏလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။ အခု ကျမတို့ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ လှုပ်ရှားလာတာဟာ အဓိက ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန် တွေကို ထမ်းဆောင်ပေးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ဒီရပ်ရွာ၊ ဒီဒေသမှာ ဘယ်လိုပိုပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို လေ့လာပြီးတော့ ကျမတို့နဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ကျမတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမှာပါ။ ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ကျမတို့ဟာ နတ်၊ သိကြားလည်း မဟုတ်ဘူး။ ၀ိဇ္ဇာဇော်ဂျီလည်းမဟုတ်တော့ ‘ဖြစ်စေ’ ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကျမတို့ ကြိုးစားပြီးတော့ အလုပ်လုပ်မှဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စုပေါင်းအင်အားနဲ့ ကျမတို့ဟာ ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားရဲတဲ့သတ္တိ၊ ကျော်လွှားနိုင်တဲ့အရည်အချင်းတွေနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။...
အောင်ဝေး – ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၁ ၀ ) https://t.co/mvZAzZzQME https://t.co/24ZVCQ78x8 about6hours ago ReplyRetweetFavorite
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့အမှတ်တရ ပန်းချီပြပွဲ https://t.co/cBYmDXy3oz https://t.co/F9xe6SCvnw about6hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်းငွေကြည်၊ မြန်မာမြူးဇစ်ပွဲ နဲ့ စာရေးဆရာညီတင့် အစီအစဉ်များ https://t.co/6CrZwRB5fj https://t.co/tvDGaAhYvQ about6hours ago ReplyRetweetFavorite